Mpanjaka mitaingina boriky. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 30, 2012 Laisser un commentaire sur Mpanjaka mitaingina boriky.
« Lazao amin’i Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Mat.21:5
Ny advento dia tonon-taona iray eo amin’ny fiainam-piangonana. Ny Soratra Masina vakiana eo amin’ny Fiangonana dia miova ho amin’ny taom-pamakiana vaovao. Ny advento dia hanambarana fiomanana na fiandrasana fahatongavana zavatra iray. Ny ambaran’ny Teny eto dia ny fahatongavan’ny Mpanjaka.
Maro no mety ho antony ahatongavan’ny Mpanjaka amin’ny toerana iray: mety ho fampandriana tany, mety ho fitsidihana ho famantarana, mety ho fitadiavana fihavanana… Koa raha ho fampandriana tany dia tsy maintsy ho amin’ny fampisehoan-kery sy fahefana. Raha miresaka fampisehoan-kery dia ny fitaingenana soavaly izay haingam-pandeha sy matanjaka no ahitàna kokoa ny hery noho ny fitaingenana boriky, na zana-boriky. Ny fitaigenan’ny Mpanjaka zana-boriky eto dia fanmbarana fitadiavana fihavanana. Mpanjaka tonga hitady fihavanana ity Mpanjaka tonga ity, ary voalaza eto moa fa MPANJAKA avy ho anao, malemy fanahy, tsy hamaky ady, fa mitady fihavanana.
Efa akaiky indray ity ny Noely, andro izay hahatsiarovana ny nahatongavan’Ilay Zanaka lahy tokan’Andriamanitra tety an-tany, tonga nofo, Mpanjakan’ny mpanjaka, Ilay Teny tonga nofo ka niara-nonina tamintsika, Andriamanitra amintsika, Ilay nanetry tena ka natera-behivavy, ary teraka tao antrano tsizarizary, dia tranon’omby.
Misy karazany roa ny Fihavian’ny Tompo:
– Ny fihaviany voalohany, amin’ny fietrena sy ny fahalemem-panahy, mitady fihavanana.
– Ny fihaviany faharoa dia ny fihaviana amim-boninahitra, tsy hitady fihavanana intsony fa tonga amin-kery, hitsara ny velona sy ny maty. « Indro Izy avy amin’ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany. » Apoka.1:7. Raha dinihina izao Teny izao dia milaza hery, « avy eny amin’ny rahona ».
Azo dinihina avy hatrany ny maha-samihafa ny hoe Jesosy zaza teraka ao an-tranon’omby, sy ny hoe Jesosy avy eny amin’ny rahona. Ny iray dia Jesosy Tia, mitady fihavanana, mitondra fampihavanana.
Ilay Zanak’Andriamanitra nanaiky hokapohina, nanaiky ho faty, nanaiky alatsa-drà, mba hananan’izay rehetra mandray Azy hery ho tonga Zanak’Andriamanitra.
Mbola fotoana hitadiavan’Andriamanitra fihavanana aminao ary izao anio izao, amin’ny fahalemem-panahy no hahatongavany eo aminao: vonona ve ianao handray Azy? Vonona ve ianao hanavao indray ny fanolorantenanao ho Azy?
– Satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky kokoa noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika, … aoka isika hitondra-tena tsara toy ny amin’ny andro; tsy amin’ny filalaovan dratsy, na amin’ny fahamamoana, tsy amin’ny fijangajangana na amin’ny fijejojejoana, tsy amin’ny fifandirana, na amin’ny fialonana.
Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, Ilay Mpanjaka malemy fanahy, Ilay mbola vonona hamindrafo aminao, tsy mbola ho avy hitondra fitsarana, fa avy hitady fihavanana satria mitaingina boriky fa tsy soavaly.
– Mitaingina zanaky ny boriky miasa: mbola manambara asa Jesosy eto, mbola vonona hiasa, ary handray anao ho mpiara-miasa Aminy. Rehefa mihavana aminao Izy dia vonona handray anao ho mpiara-miasa Aminy, mbola manome fotoana ahazoanao miara-miasa Aminy. Aoka ary isika hanararaotra izao fotoana famindrampo izao indray, andraisantsika Ilay Jesosy ho Tompo, Ilay Tompo mbola malemy fanahy, tsy mbola tonga amin’ilay fotoana hoe: hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany!
Dieny mbola akaiky anao Jesosy, dieny mbola manaiky ny hitafianao Azy Izy, dia raiso Izy!
Hampahery anao anie Jesosy!
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
Publié parfilazantsaramada novembre 30, 2012 Publié dansUncategorized